Badbaadada iyo sharciga | Ramsey County
Xaalada degdega ah, soo wac 911.
Wixii warbixinno aan xaalad degdegga aheyn, soo wac 651-767-0640.
Haddii uu shaki kugu jiro, soo wac 911.
Xarunta Isgaarsiimada Xaaladda degdegga
Xarunta Isgaarsiinada Xaaladaha Degdega Degmada Ramsey waa mida ugu badan Degmada - shaqaalahooda waxay u diraan jawaabaha booliska iyo dab-daminta oo Degmada Ramsey oo dhan oo ay qaabilaan malaayiin wacitaano sannad walba.
Digniinada xaaladaha degdegga
Iska diiwaangeli si aad u heshid ogeysiimaha oo ku saabsan xaaladaha degdegga deegaanka oo fariin qoraal ahaan, i-meel ama mobeel oo hal meel ama ka badan – sida guriga ama shaqada.
Iska diiwaangeli digniinaha
Asluubta Bulshada Degmada Ramsey waxay ka shaqeysaa aasaasida bulshooyin badbaado iyo caafimaadan iyada oo la isticmaalayo waxqabadyada sare u qaado isbadelka shaqsiga iyo la xisaabtanka.
Shaqaalaha Asluubta amniga shaqaalaha Degmada Ramsey, kormeerida, halista, la talinta oo siisaa tababarka xirfadaha nolosha oo maxbuusta iyo dambiilayaasha ee xarumaha kala duwan, oo ay ku jiraan:
Xarunta Asluubta (guriga shaqada).
Xarunta Xirida Dhalinyarada.
Xafiiska Qareenka Degmada
Xafiiska Qareenka Degmada Ramsey wuxuu u adeeggaa degganayaasha Degmada Ramsey iyaga oo dabagalayo caddaalada iyo badbaadada dadweynaha, illaalinta dadka nugul, gaarsiinta adeegyada sharciga oo tayeysan oo bixinayo hoggaamin lagu gaarsiinayo natiijooyin wanaagsan oo bulshadeena ah.
U doodayaasha dhibanaha dambiga
Markii dacwad dambi ah lagu soo dalaco, u doodayaasheena waxay si toos ah ula shaqeeyaan dhibanayaasha iyo marqaatiyada si ay u bixiyaan taageero, illo iyo warbixin oo illaa nidaamka maxkamada oo hubisaa dhibanayaasha inay fahmaan xaquuqahooda.
Arimaha Ka qeybgalka Dugsiga
Ardayda sida joogtada ah u goysa dugsiga dib ayay uga dhacaan waxbarasho ahaan, iyaga oo xadeynayo dooqyadooda ee guusha mustaqbalka. Waxaan la shaqeynaa carruurta iyo qoysaska si aan u fahamno sababaha carruurta ay u dhaaftay dugsiga oo looga saaro xadeynadaas si markaas ay ugu guuleystaan dugsiga iyo nolosha.
Xafiiska Sheerifka Degmada Ramsey wuxuu bixiyaa tiro badan oo fullinta sharciga iyo adeegyada badbaadada dadweynaha. Kuwaan waxaa ku jiro roondada, baaritaanka, wadada biyaha iyo adeegyada bulshada ee xaafadaha bulshooyinka Degmada Ramsey iyo howlgalka Xarunta Xiridda Dadka weyn (xabsiga). Waaxda sidoo kale waxay bixisaa adeegyada badbaadada dadweynaha goboleedka (sida kooxda SWAT) iyo siisaa amni maxkamada degmada.
Xafiiska Sheerifka wuxuu hadeer ku shaqeeyaa sida waafaqsan heshiiska sida waaxda booliska deegaanka ee Arden Hills, Falcon Heights, Little Canada, North Oaks, Shoreview, Vadnais Heights iyo White Bear Township.
Xarunta Xirida Dadka weyn (Xabsiga)
Xarunta Xirida Dadka weyn waa 500-sariir oo xarunta tijaabada hore oo ay siineysaa adeegyada xabsiga oo badbaado iyo illaalsan shaqsiyaadka iyaga oo raacayo xiritaankooda illaa xukunka maxkamada laga gaaro. Xarunta sidoo kale waxay qaabishaa shaqsiyaadka loo haysto tijaabinta ama ku xadgudubka fasaxa tijaabada ah.
Saacadaha, tilmaanta iyo macluumaad dheerada